Saturday February 09, 2019 - 02:47:42 in Wararka by Mogadishu Times
1-Nin ayaa Xaaskiisii Xaliimo ugu tagay Isbitaalka Banadir, Qaybta Gargaarka deg dega ah Qolkii ey ku jirtay , iyada oo suuxsan oo Kooma ku jirto. Dhakhtarkii ayaa ku yiri: Intii Aqoonteeyda ah waan dadaalayaa laakin Xaaskaaga rajadeedu ma fiicno. N
1-Nin ayaa Xaaskiisii Xaliimo ugu tagay Isbitaalka Banadir, Qaybta Gargaarka deg dega ah Qolkii ey ku jirtay , iyada oo suuxsan oo Kooma ku jirto. Dhakhtarkii ayaa ku yiri: Intii Aqoonteeyda ah waan dadaalayaa laakin Xaaskaaga rajadeedu ma fiicno. Ninkii ayaa isaga oo Ooynayo Dhakhtarkii ku yiri: waxaan kaa codsanayaa in aad Xaaskeeyga badbaadiso, xaaskeeygu waa 30 Sanno jir, waxaana u baahanahay in ey Caruur kale ii dhasho. Intii uuna Dhakhtarkii jawaabin, ayaa Xaliimo xoog u neefsatay, Gacantiina Dhaqdhaqaajisay, kuna tiri: Maya Xabiibii ma ihi 30 jir, waxaan jiraa 29 sanno iyo 4 billod, welina ma gaarin 30 sanno. Horena Koomadii ayey u sii gashay. ( F.S: 1aad).
6– Islaan ayaa iyada oo hurdeeysa Dhuusa xoog leh ka fakatay, Ninkeedii oo soo jeedayna Sanka ayuu iska qabsaday. hal saac kadib ayey iyada oo argagaxsan hurdadii ka soo booday, Ninkeediina Ku tiri: waxaan ku Riyoonaday Annaga oo Baabuur saaran oo Baabuurkii mar kaliya fariin qabtay, sabab la’aan. Duqeedii ayaa ku yiri: Lug " Taayar ” ayaa ka Qarxay. Waxa ey ku tiri: sideed ku ogaatay? Waxa uu ku yiri: shanqarta ayaan maqlay. (F.S: 6aad)